Zidane oo shaki galiyay labo ka mid ah xiddigahiisa inay ka qeyb galayaan kulanka Sevilla – Gool FM
(Madrid) 17 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa shaki galiyay labo ka mid ah xiddigahiisa ka qeyb galkooda kulanka Sevilla.
Zinedine Zidane ayaa shaki galiyay xiddigaha Karim Benzema iyo Sergio Ramos inay ka qeyb galayaan kulanka adag ay habeen dambe kula ciyaari doonaan Sevilla horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Sergio Ramos ayaa canqowga ka dhaawacmay intii lagu guda jiray kulankii finalka ee koobka Spanish Super Cup oo ay la ciyaareen kooxda Atletico Madrid axadii hore, halka Benzema uusan u safrin Saudi Arabia sababa la xiriira dhaawac dhanka muruqa ah uu qabay.
Zinedine Zidane ayaa shirkiisa jaraa’id uu maanta ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Ma shaacin doono diyaar garowgeena kulanka berry, qof walba wuxuu doonayaa inuu ka qeyb galo dhacdada Sevilla”.
“Waxaan qabnay dhibaatooyin qaar, waxaana ogaan doonaa berrito cidda ka qeyb qaadan doonta ciyaartan, laakiin waxaan ognahay inaan la ciyaari doono mid ka mid ah kooxaha ugu fiican, waana inaan diyaar u noqonaa inaan soo bandhigno kulan weyn”.
“Ramos wuxuu leeyahay shaqsiyad weyn, mar walbana wuxuu doonayaa inuu ciyaaro oo uu ku soo bandhigo wax walba uu awoodo garoonka garoonka dhexdiisa”
“Waxaan go’aansan doonaa ka qeyb qaadashadiisa kulanka berri, isagu waa hogaamiyeheena, waana qof ku dayasho mudan qof walba”.